Kunezizathu eziningi ezahluKene ezenza ngisho ungazi ukuthi inani elikhulu ejenti elwa namagciwane eyaziwa kuze kube manje. Nokho, lokhu kwehlukahlukana lihlotshaniswa hhayi kuphela ukuthuthukiswa wezokwelapha nasemkhakheni wezindlela kwemithi, kodwa futhi nge ukwanda izidingo isintu kulezi amalungiselelo.
I ethile esikhulu sanoma iyiphi antibiotic ukuthi zikwazi ukumelana naso kubo. Amanye amathuluzi kungathatha izifundo eziningana zilandelana, kuyilapho kahle kwabo hhayi ziyancipha, kodwa kukhona nalabo ezibangela ukungabi namizwa flora kusukela ezinsukwini zokuqala ukulaliswa esibhedlela.
Lincomycin hydrochloride - kuyinto i elwa namagciwane izidakamizwa okuqondene iqembu lincosamides. It ikhiqizwa yiqembu actinomycetes kanye nezinye izinto eziphilayo ezithile nge izakhiwo efanayo.
Lapho zifakwa emzimbeni womuntu izidakamizwa sidlula uchungechunge ukuguqulwa izinyathelo. Okokuqala wabhubhisa igobolondo ithebhulethi noma capsule esiswini, bese izidakamizwa emathunjini amancane it is wajinge wanamatsela ukuba izinhlayiya ezincane ukuthi bayakwazi ukungena emgudwini wegazi. With zamanje wegazi ikhambi iza focus ukuvuvukala futhi lihlotshaniswa a piroksisomoy ribosomes ezinkulu. Ngamanye amazwi, lincomycin hydrochloride unika bonke ukusabela kusukela amagciwane, okuyinto eholela ekufeni. Ingxenye-ukuphila zomuthi kusukela umzimba amahora ama-5, ngokulandelana, ngemva kwesikhathi kuyadingeka ukuze ufake kabusha umthamo imithi.
Ngemva kwamahora ambalwa ngemuva abaphathi, esiphezulu lokuhlushwa zokwelapha egazini siyenzeka lincomycin. Kungcono lincomycin hydrochloride kuthathwe ihora elilodwa ngaphambi kokudla noma okuningi kusukela ngaleso sikhathi, ngoba reception ngokudla kunciphisa ukumuncwa zomuthi ngo-50%.
izinguquko umzimba izidakamizwa ihlolwe ngokuyinhloko isibindi, izinso kanye okukhipha ke ngokufanele ukungasebenzi noma iyiphi yalezi izitho kungaholela alibale imikhiqizo nokwahlukana lo muthi emzimbeni - nokuthuthukiswa ukusabela anobuthi.
Kumele kuqashelwe ukuthi le-antibiotic possesses kanyekanye isinyathelo ibhidi: amagciwane futhi bacteriostatic. Omunye wabo kungaba linqobe nezinye, noma ngingekho ngokuphelele - konke kuncike nozwela izilokazane ezincane futhi umthamo zomuthi. Yiqiniso, kubaluleke kakhulu futhi has ubude izidakamizwa ukuphatha, kanye ukuhambisana neminye imithi.
Lincomycin hydrochloride kunomphumela maximal zokwelapha ngokumelene Gram-HIV-non-spore obumba anaerobic bacterium, kodwa kuqashelwe, futhi umphumela wawo nenzuzo maqondana ezithile spore anaerobic.
- iziyaluyalu we umgudu yasenhla nemithombo yasenzansi imvelo samafayela;
-patologiya ENT (otitis, sinusitis, pharyngitis futhi laryngitis);
- izilonda ezithathelwanayo kanye gnoynikovye kwesikhumba, izicubu ezithambile kanye namalunga;
- ebomvu umkhuhlane nesihudo.
Lincomycin hydrochloride babelwe ukwenza umuntu omdala abone 1.5 amagremu ngosuku, ihlukaniswe 3 ngemithamo (2 Amaphilisi izikhathi 3 ngosuku). Ukunakekela kumele kube ihora-8 isikhawu phakathi yokwamukela amaphilisi, njengoba ukusetshenziswa engalawuliwe kwamaphilisi kungabangela inombolo okuba nemiphumela engemihle. Ngo izifo ezimiyo njalo ngaphezulu ezinzima futhi okwenzeka umthamo nsuku zonke kungenziwa lenyuka 2 amagremu zomuthi.
Izingane ezingaphansi kweminyaka yobudala engu-14, lincomycin (500 mg amaphilisi) abelwa kuncike isisindo, ikakhulukazi 30 mg ngayinye kg 4 ngemithamo ahlukaniswe, uma kunesidingo, umthamo kungase kukhule kuya ku-60 mg ngayinye isisindo amakhilogramu umzimba.
Yonke inkambo yokuyelapha kusukela ezinsukwini eziyi-10 kuya ku-3 amaviki, kuye ngobucayi isifo futhi isimo somzimba sokuzivikela sesiguli.
Ezinye iziguli kungenzeka ngezinye izikhathi kube ukusabela normal ngemuva kokuthatha izidakamizwa:
- ukuhlanza, ukukhishwa yisisu;
- ukuqubuka esikhumbeni futhi nolwelwesi lwamafinyila;
Kuyadingeka ukuthatha imithi elwa namagciwane kuphela kadokotela Isikali wathi nokulandela isikhawu esiphakathi reception. Uma uhlangabezana nanoma iziphi izimpawu engavamile noma izimpawu sebephuze izingilazi izidakamizwa, kubalulekile ukuba kudokotela futhi ungayisebenzisi ukwelulekwa.